musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Asina kuzivikanwa Taipei kuOTDYKH LEISURE Moscow 2019
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • Taiwan Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
25th International Trade Fair Yekufamba & Tourism
Taipei inzvimbo yezvakawanda zvinozivikanwa zvakasarudzika maficha uye inosimbisa zvinokwezva. Pamusoro pechinyorwa ndeye inozivikanwa Taipei 101 shongwe, yayo inoshamisira hupfumi nzvimbo yekudyira uye yakanakisa rondedzero yeakakwira tech-yakasanganiswa sevhisi nzvimbo. Kubva kudunhu reguta rekare kusvika kumatunhu anotsanangurwa nekumhanya nekumhanyisa kune ramangwana, uye kubva kunzvimbo dzinoyemurika dzesango kuenda kunzvimbo dzemhando yepamusoro dzezvitoro, unogona kuzviwana zvese muTaipei. Mukati meawa imwe kubva kuguta, ngatitange kuongorora kwecology-ecology mupaki yenyika. Tsika dzechinyakare uye hunyanzvi zvinogara mukufananidza neanopisa mumatekinoroji ehunyanzvi. Izvo zvese zvinowedzera kumusoro kune yakawanda kwazvo nhoroondo yezviitiko zvekufamba kweguta. Kunze kwenhoroondo yaro inonakidza uye mabasa aro anonyaradza, ari nyore kushandisa, chinogara chichifadza vashanyi vanoshanya kufadza kwekugamuchira kweguta. Vanhu vane hushamwari veTaipei vanomhanya-mhanya vanogara vakafara kukunda kumisa chero zvavari kuita kuti vabatsire mushanyi, vachitambira mufambi kuguta ravo, kumba kwavo.
Kunyangwe iwe uchitsvaga Taipei kekutanga kana pakudzokorora kushanya, zvinoshamisa zvitsva zvitsva zvinomirira pakona dzese. Novelty chikamu chemukati chehunhu hweTaipei, nekuti chiito chisingaperi uye kufamba zvakavakirwa muDNA reguta rino, kuenzanisa hushamwari hweDNA-nhanho uye mutsa. Kuti taipei Taipei ive inofanirwa-kushanyira guta kune vese vemuno nevekunze vashanyi, Taipei inoramba ichitsvaga kutaurirana nenyika yepasirese uye inopa yazvino munzira dzekufamba uye yakasarudzika mazano matsva, ichiwedzera kuoneka kwayo kwepasirese uye degree rekusiyanisa kubva kune mamwe maAsia. maguta. Panguva imwecheteyo, iyo yekushanya uye maindasitiri ane hukama akaunzwa pamwechete mukugadzirwa kwemuchinjikwa-muganho, weindasitiri-indasitiri yekuvandudza zvekushanya. Innovation yakaroora zvinowirirana netsika, uye mukati meiyi nyowani tsika yaTaipei yetsika inopona uye inobudirira. Tinokukoka nemwoyo wese kuti uuye kuzoshanya uye uongorore "Undiscovered Taipei," iyo Taipei yausati wamboona. Ngatitaurirei Taipei kune yako runyorwa rwe "inofanirwa-kushanya" yekushanyira nzvimbo dzaunouya paAsia.
Isu tinofara kwazvo kuva nemukana wekuzivisa Taipei kwauri pa OTDYKH Zororo 2019, 25th International Trade Fair Yekufamba & Tourism. PaTaipei Pavilion yedu yechiitiko ichi takauya nechiratidzo cheTaipei chipo & souvenir chikafu chinobata chevaenzi kuti vateedzere, uye zvakare takaronga yakasarudzika tsika-yekugadzira zviitiko zvechiitiko pavilion kubatsira vashanyi kuziva Taipei zvirinani. Kana uchifarira kudzidza zvakawanda nezve zviwanikwa zvekushanya zveTaipei, unokokwa nemutsa kudonha nedumba redu kuOTDYKH Leisure 2019, Moscow, Expocentre Fairgrounds, Pavilion 2, Hall 1.